GMP inomiririra Yakanaka Kugadzira Kudzidzira, Iwo akakurudzirwa maitirwo anomisikidza zvigadzirwa zvekugadzira pamwe nezvinodiwa zvishoma mumaindasitiri akasiyana siyana. Sanganisira maindasitiri ezvekudya, ekugadzira mishonga, ekuzora, nezvimwewo. Kana bhizinesi rako kana sangano richida imwe kana dzakawanda dzimba dzekuchenesa, zvakakosha kuti uve nehurongwa hweHVAC hunogadzirisa mamiriro emukati uchichengetedza zvakakwirira zvemhando yemhepo. Nemakore edu mazhinji eruzivo rwekutsvaira, Airwoods ine hunyanzvi hwekugadzira uye kuvaka dzimba dzekuchenesa kune akaomesesa matanho mukati mechero chimiro kana kunyorera.
HVAC Zvinodiwa Zvekutsvaira
Imba yekuchenesa inzvimbo inochengetedzwa nharaunda iyo inenge isisina kusvibiswa kwezvakatipoteredza zvakaita seguruva, zvinofambiswa nemhepo, ma microbes kana mamhepo emakemikari, sekuyerwa muzvidimbu pa cubic mita.
Kune akasiyana maratidziro emakamuri akachena, zvinoenderana nechishandiso uye nemhepo isina kusvibisa mweya. Dzimba dzakachena dzinodikanwa mukutsvagisa kwakawanda senge biotechnology, zvekurapa uye zvemishonga, pamwe nekugadzira zvigadzirwa zvemagetsi kana zvemakomputa, semiconductors uye michina yeaerospace. Dzimba dzakachena dzinoda yakasarudzika system yekufefetera kwemhepo, kusefa uye kunyangwe zvinhu zvemadziro kuchengetedza iwo mweya wemhepo pane zvakatemwa zviyero. Mukushandisa kwakawanda, humidity, tembiricha uye static magetsi kudzora ingangodawo kugadziriswa.
Medical Zvishandiso Fekitori
Chipatara Central Supply Kamuri
Yedu Yekuchenesa Mhepo Kubata Yuniti, Ceiling Systems, uye Gadzirisa Makamuri akachena akakosha kune zvivakwa zvinoda maumbwe uye utachiona manejimendi munzvimbo dzakachena uye dzemarabhoritari, kusanganisira kugadzira mishonga, kusanzwisisika kwemagetsi ekugadzira, marabhazi ekurapa uye nzvimbo dzekutsvagisa.
Airwoods mainjiniya uye mahunyanzvi inguva refu nyanzvi mukugadzira, kuvaka uye kuisa tsika dzakachena dzimba kune chero chinzvimbo kana chiyero chinodiwa nevatengi vedu, kuita musanganiswa wehunhu hweHEPA kusefa neepamberi mhepo yekufema tekinoroji yekuchengetedza zvemukati zvakasununguka uye zvine tsvina. Kune makamuri anochida, tinogona kusanganisa ionization uye dehumidification zvikamu mukati mehurongwa kudzora hunyoro uye static magetsi mukati meiyo nzvimbo. Tinogona kugadzira nekuvaka softwall & hardwall makamuri ekuchenesa enzvimbo diki; isu tinokwanisa kuisa modular makamuri ekuchenesa ekushandisa makuru ayo angangoda kuchinjwa uye kuwedzerwa; uye kune zvimwe zvinogara zviripo kana nzvimbo hombe, tinogona kugadzira yakavakirwa-munzvimbo-yekuchenesa imba kuti igone chero huwandu hwemidziyo kana chero nhamba yevashandi. Isu tinopawo imwechete-yekumira EPC yakazara chirongwa chekurongedza masevhisi, uye kugadzirisa zvese zvinodikanwa zvevatengi mune yakachena kamuri chirongwa.
Iko hakuna nzvimbo yekukanganisa kana zvasvika pakugadzira uye nekuisa yakachena dzimba. Kunyangwe iwe uri kuvaka imba nyowani nyowani kubva pasi kumusoro kana kugadzirisa / kuwedzera yako iripo, Airwoods ine tekinoroji uye hunyanzvi hwekuona kuti basa raitwa mushe kekutanga.
Bangladesh Injector Kugadzira Yakachena
Ghana Mabhodhoro Emvura Achizadza Akachena
Chirwere Kudzora Center PCR Yakachena
Disposable Mask Kugadzira Yakachena imba
Kudya & Zvinodzvinyirira Kudzora Center Cleanroom